सर्पसँगै खेल्ने नेपाली युवती जसको घरभरि सर्प छन् (भिडियो) , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सर्पसँगै खेल्ने नेपाली युवती जसको घरभरि सर्प छन् (भिडियो)
काठमाडौँ। घरमा विषालु सर्पहरु छन् । बाबु, आमा छरछिमेक डराउँछन् त्यो कोठामा जान तर एक युवती सबु पाण्डे जान्छिन् । सर्पलाई समाउँछिन् । मुसा, भ्यागुता दिन्छिन्, समाएर नुहाईदिन्छिन पनि ।
स्नेक म्यानको रुपमा चिनिएका पाल्पा अर्गेलीका सागर पाण्डे पछिल्लो समय सर्पको खेती गरेर बसेका छन् । बिभिन्न ठाउँमा हुने मेला महोत्सवमा सर्प प्रर्दशन गरेर उनी चर्चामा आए । यति मात्र होइन उनको घरमा विषालु सर्प समेत छन् । घरमा आउने पाहुना समेत उनको घरमा सुत्न डराउँछन् । भाइकै काम देखेर उनकी दिदी सबु पाण्डेले समेत सर्पसँग नजिक हुन थालिन् ।
सबुलाई समाउन र सर्प खेलाउन डर लाउदैन तर भाइ सागरले जस्तो मुखभित्र हाल्न भने डराउँछिन् । घरमा पालेका सबै सर्पको स्याहार सुसार भाइ सागर भएको बेला आफैले गर्छिन् । हामी उनको घर पाल्पाको अर्गेर्ली पुग्दा पनि उनले सर्पसँग खेल्ने रमाउने गरिन् । हेरौँ यो भिडियो ।
अक्सफोर्डबाट पढाई, बलिउडमा काम : तस्वीरमा हेर्नुहोस् अन्डरवर्ल्ड डनकी गर्लफ्रेन्डको सुन्दरता
तपाईको आजको दिन कति फलदायी ? हेर्नुस् राशिफल (भिडियोसहित)
मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने तयारी
अमेरिकामा आज बेलुका चन्द्रगहण लाग्दै, राशीअनुसार ग्रहण हेर्दाको फल यस्तो हुनेछ
आर्थिक सहायतामै जान्छ मासिक १ करोड बढी रकम
'दाइजो'ले ज्यान लियो: दुई वर्षे छोरीलाई समेत विष खुवाइन् सीमाले
प्रधानमन्त्री ओली कतारको राजधानी दोहामा